IT i Jesosy! INONA Ny olona tsirairay dia mila mahafantatra
IT i Jesosy!
Inona no isaky ny Olona mila mahafantatra
(Tsindrio ny nanasongadina ambony hihaino)
S O INONA NO IZY ATAO ? Ny Baiboly Masina Manome toky antsika ny INONA NO i Jesoa Kristy no tanteraka tamin'io , ary NAHOANA.
The Bible (Andriamanitraihany nomendri-pitokisana Teny ho an'ny olombelona) dia milaza amintsika:Isika rehetra dia teraka tamin'ny ota natiora. Nandova izany avy izahayAdama sy i Eva - ny voalohany namorona ny olona roa - noho ny tsy fankatoavana (fahotana) amin'Andriamanitra. I Jesosy Kristy ho an'ny olona rehetra nandoa ny famotsoran-keloka ara-panahy ho tonga ny Andro Fitsarana amin'ny alalan'ny fanaovana ny sazy tamin'ny maty lozabe fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana - izay midikaNYfamaizana.
Marina izany! I Jesoa Kristy no nanao izany! Ny vidim-panavotana i Jesosy nandoa vola ho an'ny MANDRAKIZAY ARA-PANAHY FAMELAN-KELOKA - FREE famelan-keloka AVY NY MANDRAKIZAY TONGA fahafatesana ara-panahy ny Andro Fitsarana .
Sary an-tsaina hoe ao amin'ny fitsarana, sy ny Mpitsara anao vao voaheloka ho faty noho ny heloka bevava nataony anao. Sary an-tsaina koa i Jesoa Kristy-dia aminareo mpisolovava. I Jesoa Kristy Hoy ny Mpitsara (na amin'ny teny hafa, Andriamanitra ny any an-danitra): "Ny Honor, Te-hanompo ny mpanjifa ny didim-pitsarana sy handoa ny sarany ny / ny ratsy-manao amin'ny maty fa tsy toy izany ny mpanjifa dia afaka ho afaka amin'ny ny heloka izy / izy efa nataony. "Azonao an-tsaina ve ny olona iray manao zavatra toy izany ho anao ?! IT i Jesosy!
Mazava ho azy fa mety ho ny tenanao koa hoe amin'ny fotoana izay; tsy nanao na inona na inona ho voaheloka ho faty! Aho rehefa nanendrikendrika! "Inona no heverina izany, Andriamanitra ?!" Ity ny valinteninao: 10 didy nomen'Andriamanitra ho an'ny olona mba ao amin'ny Testamenta Taloha Baiboly. Na iza na iza handika ny iray amin'ireo didy dia tsy maintsy ho voasazy noho ny nandika azy ireo an'Andriamanitra. Aiza no milaza fa ?! Izao no voalaza fa ao amin'ny Romana 6:23: Fa ny tambin'ny ota dia ny fahafatesana [ Mandrakizay fijaliana ho an'ny olona iray ny ota], fa ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika. Efa nandainga ve ianao? Nandainga indray mandeha monja? Ny olona rehetra amintsika no nandainga, fara fahakeliny, indray mandeha. Faha-9 amin'ny 10 didy hoe: Aza mandainga (vavolombelona mandainga). Fantatrareo ny zavatra izay mahatonga antsika? Ny manota tsy nankat' mpandainga manohitra ny fitondran-tena ny lal'na - ny 10 didiny. ( Apokalypsy 21: 8 koa milaza amintsika hoe inona no mihevitra ny lainga). Ianao vao mamaky mihoatra noho izay lazain'Andriamanitra momba ny tsy mankat' nanota taminy izy tamin'ny nivadihany fotsiny IRAY amin'ny lal'na ny fitondran-tena; ny karaman'izay manao izany dia fahafatesana. Pihetseham-po - ny fahafatesana ara-panahy. Total fisarahana amin'Andriamanitra sy ny agonizingly ny fijaliana noho ny fahotantsika ho mandrakizay - tanteraka tsy manan-misy fitiavana, ny fiadanana, fanantenana sy ny fifaliana na ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra intsony (raha tsy izany dia fantatra amin'ny anarana hoe helo). NEFA NY Ity ny vaovao tsara indrindra! Afaka mahazo famelan-keloka ho an'ny rehetra ny tsy fankatoavana (fahotana) an 'Andriamanitra ny Ray sy ny manota ny hafa izao ankehitriny izao ary azo antoka Amin'izao fotoana izao fa amin'ny Andro Fitsarana, ny fahotantsika dia tsy ho natao hamely anay! Ankoatra izany, ny anarany dia hatao voasoratra ao ny zanak'ondry bokin'ny fiainana (Jereo: Apokalypsy 20:15 ). Ahoana no hetezan'izany ?! Amin'ny alalan'ny fangatahana an'i Jesosy Kristy mba hamela antsika noho ny fahotantsika, ary matoky fa Izy no voavela antsika amin'izy ireo fotsiny ny fangatahana sy mahatoky isika! Jesosy, dia hanao izany! 1 Jaona 1: 8-9 manao hoe: Raha hoy isika: Tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny helokay sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra. Noho izany raha manao an'i Jesosy ny manokana Tompo sy Mpamonjy ... isaky ny manota isika - dia manana zo hangataka an'i Jesosy Kristy mba hamela antsika ny fahotana (s) - manadio antsika toy ny hoe isika tsy nanota - ka rehefa fontsika mijanona nidaroka, afaka matoky isika fa tsy maintsy hijaly fanamelohana mandrakizay noho ny fahotantsika. Jesoa Kristy nanao izay tsy misy hafa olombelona no fanaony na mbola afaka manao. Izy no hany olona eto amin'ity tany ity izay tsy nanota . Ary satria tsy nanota Izy, Izy no hany azo ekena sorona Andriamanitra Ray dia hanaiky handoa fandoavana vidim-panavotana ho an'ny tsirairay ny fahotantsika. Izany no tena mahavariana, sa tsy izany ?! Anefa i Jesosy IT! NAHOANA? Noho ny FITIAVANA ny mpanota very. Tsy misy amintsika mahalala ny am-po, rehefa dia hijanona daroka, sa tsy izany? Aoka ianao ho tena Nampirisihina mba hihavana amin'Andriamanitra Ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany fotoana . Mivavaha, ka lazao amin'i Jesosy ianao dia miala tsiny noho ny manota amin'Andriamanitra. Angataho Izy mba hamonjy anao amin'ny fahotanao. Daily nanao azy voalohany amin'ny zava-drehetra ny hevitrao, dia ataovy ary ataovy. Raha vao araka izay azo atao, ho rano natao batisa , ary angataho ary hatoky an'i Jesosy mba hameno anareo amin'ny Fanahy Masina (sy hampianatra anao ny fomba mba hijanona feno isan'andro! ) Mba hahafahanao hahazo hery avy amin'ny Fanahy Masina mba hankafy ny famakiana ny Testamenta Vaovao Bible (ny LATEST fanekempihavanana Teny ho an'ny olombelona), ary mankat' ny didy Andriamanitra voarakitra ho an'ny mpanara-dia an'i Jesosy Kristy mba hankat' (tsara ho anao - ianao kosa ho voky ny hanao izany!). Miaraha amin'ny Kristianina hafa mpino Afaka manampy amin'ny famaliana ny fanontaniana maro ianao mety manana, ary iza no hifona ho anareo sy hampahery. Mangataka i Jesoa Kristy mba ho Mpamonjy anao manokana, ary manao Azy hoe Tompo ny fiainana NY FANAPAHAN-KEVITRA HO EO AMINAREO hendry velively hanao. Ary ho entiko ho mandrakizay Valisoa mahafaly ... ary Andriamanitra no ho faly toy izany fa manana
TSY lany ny tanjona mandrakizay Andriamanitra nanomana ho anao! Andriamanitra mihitsy no namorona anao mba ho rava famoronana ny - tsy hanadino izany - nefa niakatra ho any aminareo mba hamela Azy hiasa eo amin'ny fiainanao - isan'andro. Izy dia tsy hanery anao. Tsy maintsy foana no nanasa. (Akaiky ny fifandraisana dia tsy nanohana mandrakizay miaraka amin'ny olona iray tsy misy ezaka, na toy izany indrindra amin'Andriamanitra. Mila mavitrika nanenjika ny tena manokana ny olona eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra dia maniry NY mpanao fikatsahana Azy mihoatra noho ny zavatra hafa eo amin'ny fiainanao . Maniry toerana voalohany - tsy faharoa. Ary ao ny manao izany ... tSY Azy dia tsara kokoa noho ny aminareo ! mafy izy, ka maniry anao ho avy izany fahatsapana , malalako. izy no tena. ity fiainana ity no iaingana amin'ny famindram Mpamorona izay haharitra ho mandrakizay .)
[azafady nitranga izany amim-bavaka ny amin'ny olona izay mety tsy efa nandre ny zavatra nataon'i Jesosy ho azy ireo amin'ny alalan'ny maty teo amin'ny hazo fijaliana. Mandefa izany amin'ny olona iray amin'ny teny Anglisy na teny hafa, dia ataovy amin'ny Internet Search fanoratana: JESOSY nanao izany teny INDEX ]
AZAFADY handika ary apetaho " i Jesosy IT! " Ny hanampy hizara ny filazantsara
(Azonao atao ny apetaho "IT i Jesosy!" Tao amin'ny pejy Facebook - mailaka sonia - vohikala - Blog - Video, sns)
AZAFADY ATAOVY NY TARATASY dika mitovy "IT i Jesosy!" SY hahatonga azy ireo ho azon'ny hafa izay tsy mbola nandre an'io Andriamanitra mahatahotra FAHAMARINANA - TRUST ny Tompo mba hanome anao famoronana FOMBA NAHAZOANA teo an-t'nan'ny NY HAFA izay tsy HITA 'ry fa RENAREO NY VAOVAO TSARA.
(Ny fanaovana dika mitovy mba hizara: Ity misy . PDF rakitra )
Fa na iza na iza tsy manana ny ho enti-pirinty avy ny dika mitovy ny manana kopia natao mba hizara, dia handefa anareo ny dika mitovy ity nataon'i Jesosy IT! pejy nanoratra ho anareo amin'ny fiteny ny safidy. Fotsiny handefa mailaka antsika hangataka ny dika mitovy ary aoka isika mahalala fiteny inona no tianao izany ao (Ampiasao ny Google Language Translator hita tao an-tampony ankavia ity pejy hilaza aminay fiteny inona no tianao ny boky ho any.) Aza adino ny manome antsika ny adiresy mailaka mba handefa azy ho any.
Fa na iza na iza mipetraka any amin'ny kontinanta Etazonia izay te 50 FREE dika mitovy nataon'i Jesosy IT! mba ho azo ny hafa, mailaka antsika fotsiny hangataka azy ireo ary manome anay ny adiresy mailaka.
Ny mailaka: ptoffice@precious-testimonies.com
Tahaka ity Pejy ity? Alefaso izany ny Sakaizan'Andriamanitra Ianao!